::::::::::::: - eikoko's JimdoPage!
AungSanSuuKyi meets Hillary Clinton
Daw Aung San Suu Kyi & VOA Interview (English)
Burma Independence (January41948)
Ban that scene (myanmar sensorship)
six of anti virus keys
Some of The Best Uses Of Laptops!
Shwedagon Pagoda ပုံတော်အား ဓနပြုပါသည်။
Two crew members plucked from the Irish sea after 81metre cargo vessel sinks - but five still missing
Duke of Cambridge called out at 2am when captain madeamayday call
Prince now back at base after being involved in operation over 'several hours'
By Craig Mackenzie and Rob Cooper
မေးလ်ထဲမှရတဲ့ ကျန်းမာရေးနည်းလေးပါ။ မမေမွန်ကျော်ရေးထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အကျိုးရှိမယ့် ဆေးနည်းလေးမို့ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဦးစွာ ပြောပါရစေ။ အမျိုးသားကော အမျိုးသမီးပါ လွယ်ကူစွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းဟာ ငွေကုန်သက်သာတဲ့အပြင် လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကင်းပါတယ်။ ရှောက်ရွက်နှင့် ရှောက်သီးရဲ့အခွံတွင် အဖိုးတန်တဲ့ အဆီဓာတ်တစ်မျိုး ပါရှိပါတယ်။ ထိုအဆီဓာတ်ဟာ လေရောဂါများ၊ အသည်းနှလုံးကို အဆီဖုံးခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အ၀လွန်သူများ၊ ဗိုက်ခေါက်ထူပြီး အလှပျက်အောင် ၀မ်းဗိုက်ရွှဲလာသော အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများအတွက် အလွယ်တကူ ဖော်စပ်သုံးနိုင်တဲ့နည်းကို တင်ပြလိုက် ပါတယ်။ ပထမ ရှောက်ရွက်ကြမ်းတွေကို အရင်ရှာထားပါ။ ပုလင်းတစ်လုံးစီတွင် ရိုးရိုးသကြား သုံးဇွန်း (ဟင်းစားဇွန်း) စီ ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် ပုလင်းတစ်လုံးစီမှာ ရှောက်ရွက်ကိုးရွက်စီ ထည့်ပေးပါ။ နောက် ရေကျက်အေးများ ပုလင်းထဲသို့ အပြည့်ထည့်ပြီး အဆို့ပိတ်ပြီး နေပူထဲ တွင် ကိုးရက်လှန်းပေးပါ။ ကိုးရက်စေ့လျှင် ထိုရှောက်ရွက်စိမ်ထားသော ပုလင်းများကို ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ။ နံနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ်တို့၌ အဆိုပါ ရှောက်ရွက်ဆေးရည် ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန်တစ်ဝက်ခန့်ကို မှန်မှန်သောက်သုံးပေးပါ။ တစ်လမှ နှစ်လခန့်ရှိသောအခါ အမျိုးသမီးများ ခါးသေးရင်ချီပြီး အဆီပို ဗိုက်ရွဲမှုများကျပြီး အသားအရေစစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီနည်းက အဆီကျဆေးတို့ ဘာတို့ စားခြင်းထက် စိတ်ချရတဲ့ မြန်မာရိုးရာ ဆေးနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆေးရည်ကို မှန်မှန်သောက်သုံးပေးခြင်းကြောင့် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့် နှလုံးအဆီပိတ်ခြင်းတို့မှလည်း သက်သာပျောက်ကင်းကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါ ရစေ။
Wai Hnin, Campaigns Officer at Burma Campaign UK, speaks to Labour Party Conference in UK
Hit And Run Chinese Toddler Wang Yue Dies